Iiprojekthi ze-Elektroniki: Uyakha njani iiSekethe kunye neeSekethe eziTshintshiweyo ezifanayo
Njengokuba izibane zinokudityaniswa kuthotho okanye ukufana kwisekethe ye-elektroniki, iitshintshi zinokudityaniswa kuthotho okanye ukufana. Umzekelo, iisekethi ezimbini ezithi zisebenzise isibini sokutshintsha kwe-SPST ukucima okanye ukucima isibane. Kwisekethe yokuqala, iiswitshi zinentambo kuthotho. Okwesibini, iitshintshi zinentambo ngokufanayo.
Into enomdla ukuba uyiqaphele malunga nokutshintsha kwe-wiring kuthotho kukuba zombini iitshintshi kufuneka zivaliwe ukuze kugqitywe isekethe. Umzekelo omkhulu wotshintsho olunentambo kuthotho lwefilimu yenyukliya, apho abantu ababini kufuneka batshintshe iswitshi ukuze bavule imijukujelwa. Ukutshintsha kweentambo kuthotho kuthetha ukuba uDenzel Washington kwaye UGene Hackman kufuneka bobabini bavume ukusungula imijukujelwa.
Xa iiswitshi zinentambo ngokudibeneyo, ukuvala nokuba kutshintshiwe kuya kugqiba isekethe. Ke, utshintsho oluhambelanayo luhlala lusetyenziswa xa ufuna ukululawula isekethe kwiindawo ezimbini ezahlukeneyo. Ukuba ukutshintshwa kwemijukujelwa yenyukliya kufakelwe iintambo ngokufanayo, nokuba nguDenzel Washington okanye UGene Hackman unokudubula ngemijukujelwa.
Uyakha njani isekethe yokutshintsha
Le projekthi ye-elektroniki ibonelela ngeprojekthi elula esebenzisa iitshintshi ezimbini ukuvula okanye ukuvala isekethe ekhanyisa isibane. Iitshintshi zifakelwe iintambo kuthotho, ke zombini iitshintshi mazivalwe ukuze kukhanyiswe isibane.
Uyakha njani isekethe yokutshintsha okufanayo
Kule projekthi ye-elektroniki, wakha isekethe elula esebenzisa iitshintshi ezimbini ezinentambo ngokufanayo ukulawula isibane. Ngenxa yokuba iitshintshi zinentambo ngokudibeneyo, isibane siya kukhanya ukuba olunye utshintsho luvaliwe.
Ungazikhetha njani zonke kwiifestile
Iswekile yesicwangciso sokutya sekhalori ezili-1200
Ungayitshintsha njani ikhibhodi kwiphone
ubufumana njani ubukhulu be vector
uwusebenzisa njani umatshini wamashumi
wenza ngokukhawuleza kangakanani umsebenzi we-imodium
unyango lokuphefumla abantwana abancinci